Football Khabar » रोनाल्डो भर्सेस मेस्सी : च्याम्पियन्स लिगको नकआउटमा को चम्किएला ?
रोनाल्डो भर्सेस मेस्सी : च्याम्पियन्स लिगको नकआउटमा को चम्किएला ?
जारी सिजन युरोपको सबैभन्दा ठूलो क्लब फुटबल प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सी र इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुवैको प्रदर्शन मध्यमस्तरको मात्रै छ । किनभने, समूह चरणमा यसपटक दुवैले पर्याप्त गोल गर्न सकेनन् । आज रातिबाट अन्तिम १६ मा दोस्रो साताका खेल हुँदैछन् । जहाँ मेस्सीले बार्सिलोनाबाट पहिलो लेगको खेल इटालियन नापोलीसँग खेल्दैछन् भने रोनाल्डोले युभेन्टसबाट भोलि फ्रन्च क्लब लियोनसँग खेल्दैछन् । अन्तिम १६ का खेल अघिसम्म यसपटक रोनाल्डो र मेस्सीका नाममा समान २–२ गोल मात्रै छ ।
जबकि, सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका रोवर्ट लेवान्डोस्की र बोरुसिया डर्टमुन्डका अर्लिङ हल्यान्डका नाममा समान १०–१० गोल छ । सिजनको सुरुआतमा चोट बोकेका मेस्सीले समूह चरणका ५ खेल खेल्दै २ गोल मात्रै गरे भने रोनाल्डोले ६ खेल खेल्दै २ गोल नै गरे । अघिल्लो सिजनको तुलनामा मेस्सीका लागि यो निकै कमजोर तथ्यांक हो भने रोनाल्डोको भने हकमा अघिल्लौ सिजनको जस्तो हो ।
तर, आज रातिबाट रोनाल्डो र मेस्सी दुवैले आ–आफ्नो खेल खेल्ने हुँदा च्याम्पियन्स लिगमा कसले बढी गोल गर्ला र गोल संख्या बढाउला भन्नेमा धेरैको चासो छ । गएको सिजन मेस्सी १२ गोलका साथ सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दा रोनाल्डोले भने मात्रै ६ गोल गरेका थिए । तर, यो सिजनको सुरुआतमा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका ३५ वर्षीय रोनाल्डो भने अहिले उत्कृष्ट लयमा छन् । र, अबका खेलमा उनले गोल संख्या बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, वर्ष २०२० लागिकन मात्रै उनले कूल १३ गोल गरिसकेका छन्, जुन अन्य कुनै पनि खेलाडीको भन्दा बढी हो ।
यता, बार्सिलोनाका मेस्सीले पनि दुई दिनअघि मात्रै ला लिगामा एकै खेलमा ४ गोल गरेर आफू उत्कृष्ट लयमा फर्किएको संकेत दिइसकेका छन् । हालको अवस्थामा रोनाल्डो र मेस्सीले यस प्रतियोगितामा कसले बढी गोल गर्छ र आफ्नो टिमलाई उपाधितर्फ अघि बढाउन कसले ठूलो योगदान दिन्छ भन्ने कुरालाई चासोसाथ हेरिएको छ । च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमा सर्वाधिक सफल खेलाडी कहलिएका रोनाल्डोले हालसम्म यस प्रतियोगितामा कूल १२९ गोल गरो छन् । उनी च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् । यता, मेस्सीले हालसम्म ११४ गोल गरेका छन्, जुन रोनाल्डोको भन्दा १५ गोलले कमी हो ।
प्रकाशित मिति १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १५:४६